जनप्रतिनिधिलाइ नगरवासीकाे प्रश्न : कहिले बन्छ टेंग्रा पुल ?
जनप्रतिनिधिलाइ नगरवासीकाे प्रश्न : कहिले बन्छ टेंग्रा पुल ? इटहरी उपमहानगरपालीकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाइ पुलको अवस्था र पुनःमर्मत गरिपाउ भन्दै ३ पटक सम्म पत्रचार गरिसकेको छ।
मनिषा पुडासैनी बुधबार, असोज १, २०७६ १६:३२
इटहरी — पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने टेंग्रा पुल भत्किएर लथालङिग अवस्थामा रहेको छ। सो पूल भत्किएको पनि एक वर्ष पुरा भईसक्यो। तर पनि त्यो पुलको अवस्था आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ।
इटहरी उपमहानगरको मातहतमा रहेको सो टेंग्रा पुलको पुनः मर्मत सम्भारका लागि मेयर द्धारिकालाल चौधरीले पटक पटक संघिय सरकार अन्र्तगत सडक डिभिजन कार्यालय बिराटनगरलाइ पत्रचार गरेपनि बेवास्था भएपछि अहिले सम्म उक्त पुलको मर्मत समभार हुन सकेको छैन।
गत २०७५ जेठका्े दोश्रो सातामा एक ट्रिपरले ठक्कर दिएर क्षतिग्रस्त बनाएको टेंग्रा पुल बन्ने कुैनै छाटकाट नहुदा दैनिक सयौको संख्यामा सवारीसाधनहरू जोखिम पुर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन। इटहरी उपमहानगरपालीकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाइ पुलको अवस्था र पुनःमर्मत गरिपाउ भन्दै ३ पटक सम्म पत्रचार गरिसकेको छ।
तर संघिय सरकारको निर्देशनमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय बिराटनगरले भने अहिले सम्म पुल मर्मतको बिषयमा कुनै चासो राखेको छैन।पूर्व पश्चिम राजमार्गलाइ जोडने यो पुल मुख्य ब्यापारीक राजमार्गको रूपमा समेत लिइन्छ।
लामो समयदेखि पुलको मर्मत सम्भार नहुदा पैदल यात्री त मार्कामा परे नै त्यो भन्दा बढी पुलको अवस्था झनै जिर्ण र जतिबेला पनि भत्कन सक्ने खतरा देखिएको छ। एक त खाल्डा खुल्डि सडक समयमै मर्मत नहुनु र त्यसमा पनि जोखिममा रहेको पुल समेत भत्किनुले सवारीसाधनहरू आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। पुल निर्माणको ५० बर्ष पुरा भइसकेको र पटक पटक सडक बिभागले समेत खतराको संकेत दिइरहदा सरकार पक्षबाट पुन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएपछि इटहरीको टेंग्रा पुल झनै जोखिममा परेको छ।
यता नगरवासीहरू पुलको बिषयलाइ लिएर जनप्रतिनिधिहरू समक्ष प्रश्नको वर्षा गरिरहेका छन।इटहरीका मेयर , उपमेयर लगायत वडाध्यक्षहरूलाइ समेत यो पुल कहिले बन्छ भनि नगरवासीहरूले उपमहानगरको कार्यालयमै पुगेर सोध्ने गरेका छन।
यसै पुलको बिषयमा इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरी संग सम्पर्क गर्दा उनले यो सडक बिभाग अन्तरगत पर्ने भएकोले आफै मर्मत गर्न नपाइने बताउदै पुलको बिषयमा निरन्तर दबाब दिने बताए। यता यस बिषयमा सडक बिभागको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १, २०७६ १६:३२